Mould Nhau |
Matambudziko Akajairika Mukugadzirwa KweMhuri Chigadzirwa Mould
Mune akawanda maindasitiri zvigadzirwa, izvo zvinoda saizi uye chimiro chezvigadzirwa zvakakwira zvakanyanya Naizvozvo, vagadziri veforoma yezvigadzirwa zvemumba vanodikanwa kuti vashandise mapurasitiki kune anonzwisisika dhizaini dhizaini kuvandudza kugadzirwa kwekugadzirwa kwezvigadzirwa zvemabhizimusi. Nekudaro, mune iyo proc ...
Shrinkage Matambudziko Mukugadzirwa kweZuva nezuva Zvinodiwa Mould
Mazuva ese Zvinodikanwa Mould kugadzirwa hakugone kusiya jekiseni muforoma fekitori, izvozvi zvezuva nezuva zvinodiwa muforoma tekinoroji iri kuwedzera uye kumberi, kuti zviite zvirinani izvi, chikuru chakuvhuvhu shrinkage chinodiwa, inova inonyanya kushanda kukosha kwezuva nezuva zvinodiwa muforoma . Ini ...
Ndeapi Matanho Anogona Kuvandudza Hunhu hweCrate Mould
Kuti tikwanise kuburitsa michina yekateti inokodzera, isu tinofanirwa kupa mhando Crate Mould. Saka matanho api anogona kuvandudza mhando yemakreyiti? Gadzira yakakwana crate muforoma kugadzirwa manejimendi sisitimu, ziva chigadzirwa data manejimendi, maitiro data manejimendi, kuronga manejimendi uye chirongwa ...
Maitiro Ekuita Neiyo Deformation yeiyo Dustbin Mould
Kune zvikonzero zvakawanda zvekushanduka uye kutsemuka kweiyo Dustbin Mould, inonyanya kuenderana neyakaumbwa yekutanga, chimiro chemakemikari yesimbi, chimiro chechimiro uye muchinjiko-chikamu chikamu chechikamu, uye maitiro ekurapa kupisa. Kutsemuka kunowanzo dzivirirwa, asi kupisa t ...
Maitiro Ekunyatso Chengetedza Iyo Mould Yemhuri Chigadzirwa Mould
Zvese zvine hupenyu hwakati. Kuti tiwedzere hupenyu hwebasa, isu tinofanirwa kuziva nzira chaiyo yekugadzirisa. Dzinotevera idzo dzakakodzera nzira dzekuchengetedza dzeMhuri Chigadzirwa Mould. Kutanga, iyo yekutanga nguva nenguva yekuchengetedza iyo mold yekupfeka curve yezvigadzirwa zvemumba iripo mune yega ...
Mazuva ese Kugadziriswa Magadzirirwo eDhivhosi Zvinodiwa Mould
Hupenyu hwebasa reDaily Zvinodiwa Mould, kuwedzera kune yakanakisa muforoma dhizaini, yekugadzira yakakwira-chaiyo, yepamusoro kupisa kurapwa mhedzisiro, uye kwakakodzera kusarudzwa kwekugadzirisa michina, chakuvhu uye zvimwe zvinhu zvakare chikamu chakakosha chekushandisa uye kugadzirisa. , nhasi uno ...
Maitiro Ekugadzira Crate Mould Nehupenyu Hurefu
Chekutanga pane zvese, yakanaka Crate Mould dhizaini uye chimiro. Iyo inokwanisika crate muforoma inofanirwa kuve neakakwana mold chimiro usati watanga chirongwa. Saka Heya akapedza nguva yakawanda achiongorora chimiro chemumba uye dhizaini dhizaini, kusanganisira kudzvora dhizaini kona, chigadzirwa pamusoro microcosm, gate system dhizaini, ex ...
Position yeiyo Ribs Uye Gussets Inokanganisa Iyo Crate Mould Chimiro cheiyo Assembly
Proportional ukobvu maitiro anofanirwa kucherechedzwa pakuvaka mbabvu uye gussets. Yakareba kutenderera nguva inogona kutarisirwa kana mbabvu kana gussets zvakare zvine hukama neasipo, madziro echinhu, kunyura, kuruka, weld mitsara (zvese zvichikonzera kuwanda kwekumanikidza kutambanudza). Chinzvimbo che ...
Nei Kutonhora Kunokosha Kuti Tafura Mould
Dhizaini yeiyo inotonhora sisitimu yakakosha zvikuru mujekiseni. Izvi zvinodaro nekuti kuumbwa kwechigadzirwa chepurasitiki kunongotonhorera kune imwe nhanho yekuomarara, uye ipapo chigadzirwa chepurasitiki chinoburitswa kubva muTafura Mould kudzivirira deformation nekuda kwesimba rekunze. Kubva kutonhora ...
Sachigaro Mould Yakave Inokosha Midziyo Uye Bhizinesi Investment
Nhasi, maitiro ekushandisa epurasitiki fenicha ari kukurumidza kuwedzera. Midziyo yepurasitiki yakawana kubudirira kukuru mumusika. Midziyo yepurasitiki haina huremu, inogara yakasimba, haina mvura, iri nyore kutakura, isingadhuri, inofadza, uye inogona kugadzirwa nemarudzi akasiyana siyana uye zvigadzirwa, kunyanya ...
Ndeipi yakajairwa nzira yekuvandudza yejekiseni?
Kutanga, dhonza mepu yeforoma Usati wadhirowa iyo tenzi gungano kudhirowa, maitiro ekudhirowa anofanirwa kudhonzwa uye kuenderana nezvinodiwa zvezvikamu kudhirowa uye kugadzirisa data. Saizi inovimbiswa neinotevera nzira ichaiswa mucherechedzo nemazwi ekuti "saizi yemaitiro" pamufananidzo. Kana, ...
Kutonhora Line Positioning
Nzvimbo yemitsetse inotonhorera yakakosha kuti uwane kutonhodza kwakanaka kwechikamu uye nekuvandudza kugadzirwa kwechikamu. Fig. 5. 16 inoratidzira nhungamiro yegadziriro yakakwana yematanho anotonhora. Imwe poindi yekuchengeta mundangariro ndeyekuti iyo inotonhorera chiteshi dhayamita inofanira kunge yakakura zvakakwana kuve ne reasonab ...